7 ruux oo maanta siyaabo kala duwan loogu dilay Muqdisho iyo warar kale – Xorriya Online
7 ruux oo maanta siyaabo kala duwan loogu dilay Muqdisho iyo warar kale
Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa maanta siyaabo kala duwan loogu dilay ilaa 7-qof oo isugu jirtay askar iyo dad shacab ah, halka lagu dhaawacay dad masuuliyiin ah.
Ugu horeyn qarax wadada dhinceeda la dhigay ayaa lagu dilay ugu yaraan afar askari oo ilaalo u ahayd labo xildhibaan oo hore, kuwaas oo iyagana lagu dhaawacay qaraxa.
Xildhibaano hore Muxudiin Xasan Afrax iyo Xuseen Carraale oo qaraxaas lagula beegsaday xaafadda Beexaani ee degmada Shibis ayaa haatan dhaawacyadooda lagu dabiibayaa isbitaalka Digfeer ee magalaada Muqdisho.
Dhinaca kale suuqa Bakaaraha ayaa rag ku hubeysnaa bastoolado waxay hal goob ku dileen laba nin oo odayaal ahaa, xilli ay ku sugnaayeen gudaha suuqa, waxaana baxsaday kooxdii fulisay weerarkaas.
Illaa hadda ma cadda sababta loo dilay raggaas iyo cidda dishay toona.
Dhanka degmada Wadajir waxaa lagu dilay askari ka tirsanaa qeybta minishiibiyada ee booliska Soomaaliya, xilli uu isgoyska Korontada canshuur uga uruurinayey gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano BL-ka.
Waxaa baxsaday kooxdii dishay askarigaas oo ku hubeysneed bastoolado, qaar kamid dilalkaasna waxaa sheegatay kooxda Al-Shabaab.
Wararka kale ee 24-kii saac ee lasoo dhaafacay ka dhacay Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaa ugu waa weynaa:
XARARDHEERE: Wararka aan ka heleyno magaalada Xarardheere ee gobolka Mudug waxay sheegayaan in ururka Al-Shabaab ay afduubteen in ka badan 50-gaari oo ay la haayeen dad ku nool magaaladaas.
Al-Shabaab ayaa gaadiidkaas ka afduubtay mid ka mid ah laba beelood oo ay diyo u kala qaadayeen, sida uu noo sheegay qofka aan wareysanay ee ku sugan magaalada Xarardheere.
Ururkan ayaa intii ay jireen gacanta ku hayey magaalada Xarardheere oo dhacda Koonfurta gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya, isla markaana ah magaalo muhiim ah, maamulka Galmudug ayaana ku guul-dareystay inay ka xoreeyaan.
WASHINGTON: Aqalka Sare ee baarlamaanka dalka Mareykanka ayaa Jimcadii meelmariyey in Jeneraalka howlgabka noqdey ee Lloyd Austin uu hogaamiyo Waaxda Gaashaandhiga Mareykanka taas oo ka dhigeysa qofkii ugu horeeyay ee Afrikaan Ameerikaan ah oo madax ka noqda Wasaaraddaas.
LOS ANGLES: Suxufigii weynaa ee CNN Larry king ayaa ku dhintay isbitaal ku yaala magaalada Los Angles ee dalka Mareykanka.
MUQDISHO: Madaxweynaha dowlad Goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo weli ku sugan Magaalada Muqdisho ayaa kulan la qaatay Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Amb. Nicolas Berlanga Martinez.
BELEDWEYNE: Madaxweyne ku xigeenka dowlad Goboleedka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa Maanta Beledweyne kulan kula yeeshay xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Hir-Shabeelle oo shalay gaaray halkaas.
Xildhibaannada Hir-Shabeelle oo ah kuwa kasoo jeeda gobolka Hiiraan ayaa Madaxweyne kuxigeenka waxaa ay kala hadleen dardar gelinta howlaha horyaala Xilibaanada maadaama xaalado kala duwan ay kajiraan Hir-Shabeelle.
Sidoo kale kulanka ayaa waxaa ay labada dhinac uga wada hadleen sidii uga wada qeyb qaadan lahaayeen xaliinta tabashoyinka laga qabo Dhismihi labaad ee maamulka Hirshabelle.
LIIBIYA: Waxaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay xeebaha Liibiya laga soo badbaadiyay in ka badan 350 qof oo muhaajiriin ah, sida ay sheegtay Hay’adda gargaarka, SOS Mediterranee.
Waxay ha’yadda sheegtay in ku dhawaad tirada dadkaas ay kala bar yihiin carruur, kuwaasi oo aan badankood dad la socon, afar carruur oo aad u yar yarna ay ku jiraan.